नेपाल असफल राष्ट्र किन ? «
नेपाल असफल राष्ट्र किन ?
प्रकाशित मिति : 22 December, 2019 6:49 pm
नेपालको राज्य संयन्त्र निष्प्रभावी र नकाम भैसकेको छ । मलाई लग्छ नेपालको राज्य मेकानिज्म असफल हुनुमा देशको शासन प्रणाली, शासकवर्गको मनसिकता, संस्कार, शासकीय स्वरुप र शासन शैली नै मुख्य कारक हो । बिशेषत नेपालमा युबावर्ग, शिक्षितवर्ग, बाैध्दिकवर्ग र उर्जाशील जनशक्ति देशबाट पलाएन भैसकेको छ । नेपाली राजनीतिमा युवा र उर्जाशील तथा चेतनाशील नेतृत्वलाई सबै खाले जिम्मेवारीबाट कटाईन्छ । राजनीतिक पार्टी र राज्यका विभिन्न निकयमा उमेरको हदबन्दी लगाएर बृध्दहरूलाई संरक्षण गर्ने संविधान निमार्ण गरिन्छ ।
राज्यको नीति निर्माण तहमा युवावर्ग र श्रमिकवर्ग जस्ता सिर्जनशील शक्तिको सहभागीतालाई संविधानत: निषेध जस्तै गरिएको छ । संविधानत: सबै राजनीतिक पदहरुमा उमेरको तगारो त्यर्स्याईको छ । जसको कारण युवा सहभागीता बिना राज्यकाे गतिशीलता नै समप्त भएर जाँदै छ । राज्यका सबै तहमा बृद्ध बृध्दाहरुकाे मात्र सहभागीताले देश नै बृद्धअाश्राम जस्तो बन्न गएको छ । राज्यमा युवा, पौढ र पाका ब्यक्तिहरुको समावेशी संरचना बिनावर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लिङ्गीक समाबेशीताले मात्र राज्यको समंग्र क्षेत्रको बिकाश असम्भव छ ।
अन्य देशहरुमा युवाहरुले देशको शासन व्यबस्था चलाउछन, बृध्दाहरुलाई भत्ता दिएर बृध्दा अाश्रममा राखिन्छ । नेपालमा भने बृध्द, बृध्दा भएपछि बृध्दा अाश्रमको सट्ट राज्य र सरकारको नेतृत्वदायी जिम्मेवारी दिने परंम्पराले राज्यलाई निष्प्रभावी बनाई रहेको छ। जस्को कारणले देशले अग्रगती लिने कुरा प्रायः असम्बभ जस्तै भएकाे छ । देशको चालक शक्ती भनेकै राजनीतिक नेतृत्व हाे, जाे उमेरको कारण लगभग मानसिक र शारीरिक रुपमा अपांग जस्तै हुन्छ । हरेक मानिस बृध्द, बृध्दा भएपछि न त शारीरिक रुपमा काम गर्न सक्षम हुन्छ, न मानसिक रुपले नै काम गर्न सक्दछ । बृध्द अवस्थामा शारीरिक र मानसिक रुपमा असक्तता हुने कुरा जैविक तथा प्राकृतिक नियमको वास्तिकता हो ।
भौतिक जगतका हरेक बस्तु, पदार्थ र परिघटनाहरु निरन्तर गतिमा हुने कुरा शाश्वत नियम नै हाे तर यसको अपवाद नेपालमा उल्टो दिशामा देश चलिरहेको छ।
नेपालमा जतिसुकै राजनीतिक परिवर्तनहरु भए पनि परंरागत र रुढीबादी राजनीतिले कब्जा जमाएकै छ । नयाँ राजनीतिक अान्दोलनबाट अाएका शक्तिलाई पुराेनो ब्युराेक्रेसी, पुरानो न्यय प्रणाली, पुरानै सुरक्षा प्रणाली, पुरानाे संस्कार, मूल्य, मान्यताको कारणनयाँ काम गर्नै नसक्ने अवस्था र परिवेश निर्माण भएको छ । पुरानो परिवेशलाई क्रमभङ्ग नगरी नयाँ ठाउँमा पुग्न नसक्ने कुरा इतिहासत सिध्द भैसकेको छ । जसको कारण सबै नयाँ राजनीतिक शक्तिहरु पुरानै शासन प्रणाली र ब्यवस्थामा उल्टै समाहित भैरहेका छन । यहि बिध्यमान अवस्थाको कारण नेपाली राजनीतिले फड्को मार्न नसकि यथास्थितिमा गाेचक्कर मारिरहेको छ । भौतिक जगतका हरेक बस्तु, पदार्थ र परिघटनाहरु निरन्तर गतिमा हुने कुरा शाश्वत नियम नै हाे तर यसको अपवाद नेपालमा उल्टो दिशामा देश चलिरहेको छ।
नेपालका राजनीति पार्टीहरुले नयाँ ढंगले साेच्ने र नयाँ ढंगले काम गर्ने संस्कृति निर्माण नहुदासम्म नेपाली राजनीतिले काेल्टो फेर्न सक्दैन । नेपाली राजनीतिको प्रमुख समस्य भनेको सांस्कृतिक रुपान्तरणको समस्या नै मुख्य हो । नेतृत्व रुपान्तरण नभई राज्य फेरिन सक्दैन । देश बदल्नकाे लागि राजनीतिक नेतृत्वको संस्कार, संस्कृति, जीवनशैली र जीवन पध्दती फेरिनु पर्छ । देशले अबलम्बन गर्ने नीति जनअाधारीत, देशको मौलिकता बिशेषता बाेकेको लाेककल्यणकारी राज्यका अाधारभूत मूल्य मान्यताहरुमा अाधारीत हुन पर्छ । बाह्य देशको अायतित राजनीतिक प्रणालीले नेपाल र नेपाली जनता कल्याण र हित गर्न सक्दैन । यिनै ऊल्लेखित कारणले नेपाली राजनीतिकको समग्र सल्यक्रिया बिना नेपाललाई असफल राष्ट्र बन्नबाट कसैले पनि रोक्न सकिदैन । (२२ डिसेम्बर २०१५)